Ichi ndicho chifananidzo chekutanga chaicho cheiyo iPhone 7? | IPhone nhau
Kwemazuva ikozvino, runyerekupe uye zvinonzi zvinodonha zve iPhone 7 ivo vatanga kuoneka kazhinji. Nhasi, NoWhereElse atumira yechipiri 3D mockup iyo yaizosimbisa kuti iyo iPhone 7 ichave neakaenzana saizi seiyo iPhone 6s uye yakakura kwazvo kamera gomba. Iyo yekupedzisira ndiyo inoita kuti ndifunge kuti iwo mufananidzo wawakatumira MacRumors Ndicho nyepera Mumitemo yese.
Sezvauri kuona mumufananidzo, iyi inofungidzirwa iPhone ine kamera uye kupenya kwakaenzana saizi senge yazvino iyi iPhone 6s. Pano ini ndinongoona mikana mitatu: yekutanga ndeyekuti mufananidzo ndewenhema. Chechipiri ndechekuti mufananidzo unoratidza iyo "isiri-Pro" iPhone, ndiko kuti, iyo iPhone isingasanganise kamera mbiri. Panguva ino tinofanirwa kurangarira kuti imwe yeguhwa nezve iyo mbiri kamera yeiyo iPhone 7 inovimbisa kuti vanozoisanganisira chete mune yakasarudzika vhezheni ingangove iyo iPhone 7 Pro.Iyo yekupedzisira sarudzo uye iyo inoita kunge isingaite ini ndechekuti iri NoWhereElse uyo akatumira zvisiri izvo ruzivo. Muchokwadi, ndiani "akasvinwa", anogara ari mumakotesheni, uyu mufananidzo munhu asingazivikanwe.
Unogona kutanga mufananidzo weiyo chaiyo iPhone 7
Asi ngatimupei kubatsirwa kwekusahadzika uye tirambe tichidzvinyirira iro daisy: iyo inofungidzirwa iPhone 7 mumufananidzo inosanganisira a Smart Connector kuti Mac Otakara anga atotaura kare kuti haizovapo muchinhu chekupedzisira, asi isu tinogona zvakare kufunga kuti chishandiso chiri mumufananidzo chiratidziro chevanoedza vasati vatanga kugadzirwa kwemazhinji. Muchokwadi, zvishandiso dzimwe nguva zvinogadzirwa neyekuchengetedza memory iyo isingawanikwe munaGunyana apo iyo nyowani iPhones inotengesa.
Izvo zvinoita sekunge zvichave zvakafanana nemumufananidzo uyu ndiwo mitsara yeantena. Pane shanduko dzekunze idzo iPhone 7 ichasanganisira, imwe ichave iyo inogamuchirwa kubviswa kwemaantenna mabhendi, iyo pfungwa yandinofunga ndiyo yakashoropodzwa zvikuru pakaunzwa iPhone 6. Kune rimwe divi, zvinoita sekunge zvakare haina chiteshi chefoni uye, pamwe ndicho chishuwo changu, zvinoita sekunge ine ma speaker maviri. Mubvunzo unosungirwa: Unofunga isu takatarisana neiyo chaiyo iPhone 7?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Ichi ndicho chifananidzo chekutanga chaicho cheiyo iPhone 7? Mmmm ndinofunga kwete
Zvakanaka, zvakadaro, "shanduko hombe" yekusvetuka iyo inotora iyo iPhone makore maviri ega ega kushandura mabhendi enzvimbo dzenzara uye kurongedza 3,5mm jack. Uye iyo mbiri kamera inochengeterwa iyo PRO modhi, saka chero munhu anoda wepakati-saizi iPhone (4,7 inches) anochengeta iyi 6ss
Apple iri gehena-yakatsunga kuzvipfura pacheya mutsoka
Iwe unofungei Pablo? (uye nekuda kweruzivo)
Mhoro david. Ini ndinofunga kwayedza kutanga kufunga nezve chero chinhu. Iyo 12Mpx yaitarisirwa muiyo iPhone 5 (2012), kukuudza iwe chimwe chinhu chakataurwa nezvacho uye hachina kusvika kusvika makore matatu gare gare. Chinhu chejack idanho rinofanirwa kutorwa kunonoka kana kutanga, asi ini ndaizoda kuti iyo USB-C ishandiswe kuitira kuti ndive nedzimwe sarudzo. Zvisinei, ini ndatokuudza kare kuti pane zvishoma zvatinogona kutaura izvozvi. Ini pachangu handisi mumwe weavo vanotarisa dhizaini zvakanyanya, zvirinani nekuona. Kana vakachengeta ma3, kwandiri haisi nhamo.
Ini zvakare ndinokuudza chimwe chinhu: ini handiwanzo kunyunyuta zvakanyanya nezve chero chinhu. Kana iyo nguva ikauya pandinoona kuti Apple haina kundipa izvo zvandinoda, mune runyararo rwakati ndoenda kune chimwe chinhu, butterfly.
Uye izvi ndizvo zvakataurwa naTim kuti vaizotishamisa neiyo inotevera iPhone kuhwina izvo zvatakarasa, iri munguva pfupi hongu asi tinoziva kuti zvichave zvakadaro kunze zvakanyanya kana zvishoma uye kumusoro nezvikomborero zvishoma pane zvekuwedzera , sekutaura kunoita compi apple ichisimuka pamakumbo, dzimwe nguva ivo vakangwara vanoita zvinhu zvakapusa uye zvakapusa zvekuti vanozotora mutero wavo, uye nguva pfupi yadarika kune angori akatakurwa uye neshure anoenda machira kana Tim achizosiya basa.
Pindura kuna Jhus
Ini ndinofunga haingave iyo iPhone, haigone kupa zvimwe zve "zvakafanana". Isu tanga tichishandisa yakafanana dhizaini seyazvino kweanoda kusvika makore maviri uye handifunge kuti shanduko ingori maantena. Kunze kwezvo, haina 'Haitarisike kunge isina antennas, payakabuda 6 yaityisa nekuda kweiyo antenna uye pakati peiyi modhi uye yazvino iyi ini handizive kuti ndeipi yakanaka! Ini ndinotarisira chimwe chinhu chinogadzira zvese mukugadzira uye Hardware, kana Apple ikada kuenderera ichitengesa chinhu chimwe chete seyaka mashoma apfuura, ivo vanozoziva kwazvo kunyatso gadzira dhizaini inopinda muziso nekungori tarisa, inotoita zvese makore maviri .. Asi mune ino kesi inofanirwa kuve nyowani nyowani, iyo yazvino inoonekwa chaizvo uye matai, kuvandudza kana kufa!
Swift 3.0 iri kuuya gore rino uye ichave isingawirirane ne Swift 2.2